Banyere Q2 2017, nchịkọta ntanetị micro Ogologo iri nde mmadu iri nde mmadu n’ile ndi mmadu na-aru oru ugbua. Nke ahụ bụ ihe dị ka okpukpu anọ nke ndị Nemčija. Ma obu 8x onu ogugu nke Argentina. Ma obu 32x na ogugu nke Portugalska.
Prenesite Twitter na svoj račun in kliknite na Twitter (isi iyi).
Lee isi ihe m? Nazaj na Twitter in na Twitterju ni bilo več mm na nogah.
Kedu otu azụmahịa si eme ka ndị na-ege ha ntị dị irè; ma rute ma na-ere ngwaahịa ha nye onye ziri ezi na Twitterju?
0.1 Hashtag Tinye Twitter (#)
1.2 Obere ihe ndabere nke Spletne hashtage
3 3. Vozite na ọnọdụ ndị na-adịbeghị anya
Hashtag Tinye Twitter (#)
Na voljo je Twitter Twitter Hashtag (#) ni več kot jik akata azụmahịa na nobenem na azụ ahịa site n’ịkpakọta ọnọdụ ma ọ bụ isiokwu. Nke a pụtara na we nwere ike ịbanye na ahịa ahịa na ahịa ziri ezi.
Ọzọkwa, dị ka Pankaj Narang, Onye guzobere Socialert, ọ naghị arụ ọrụ na-arụ ọrụ ndị ọrụ akwụ ụgwọ nweta hashtags trending. Nke a na-emekarị ka we nweta akụkọ na-enweghị ihe ọ bụla siri ike na-eduba n’ọgbọ ọganihu. Kama nke ahụ, tụlee ịmepụta mgbasa ozi ahịa gị nke ọma na nke gị ma na-ele ha na-eto mesto na ichebara mkpa nke ndị ahịa gị tinyere ike nke kelọ ọrụ gị na ngwaahịa gị.
Nke a abghụ ihe dị iche na Twitterju, ebe ọ bụ na ọ na-asọmpụ ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ n’ebe ahụ. Site na ịmepụta ọdịnaya dị mma nke na-emetụta ma na-amasị mmasị n’ahịa gị,-ga-enwe nsị dị mma karịa asọmpi ahụ.
Ibebere dabeere na spletu
Ejiri ihe na-eme ihe na-emetụta ihe na-eme, nke pụtara na usoro ndụ dị mkpụmkpụ ma lekwasị anya. Ali so bile zuru oke nke na-adịru ụbọchị atọ.
#discounts dị ka anyị na-ejide kwa afọ #sale at #JCPenney ma nweta penny gị! Nanị ụbọchị 3! (hiperpovezava s kratko povezavo) "
Obere ihe ndabere nke Spletne hashtage
Azụmahịa ndị dabeere na spletnem mestu ga-abụ ihe a na-atụle na ụwa ahịa dịka "ire ere".
E wezụga nke ahụ, ọ na-enye aka ma ọ bụrụ na ị na-emepụta ihe n’ime ọdịnaya gị ma tinye mgbasa ozi dị mma dị ka ihe oyiyi ma ọ bụ vidiyo. A fotografija na-agwa a puku okwu na ihe kriči in ere dị ka:
Nke a abụghị echiche ọhụrụ n’ụwa nke mgbasa o ahịa kama ọ na-arụ ọrụ dịka nke ọma na Twitterju karịa na ọ dị ndụ n’ezie. Twitter dị ka ngwá ọrụ maka ịmepụta akara aha bụ ezigbo akụ dị mma ma nwee ike iji ya mee ihe n’ọtụtụ ụzọ ọ ga-esi gbanwee obi gị.
Ndị n’ozuzu ha na-ekwukarị ụdị ahịa ma ọ bụ ngwaahịa ha maara. Ihe ịma aka a na-aghọ ịghọ otu n’ime ụdị ndị ahụ. Site n’iji Twitter iji mepụta njirimara gima akara,-ga-enwe ike ịbanye na mpaghara nke ihe ùgwù ahụ.
Dị ka ihe atụ nke a, ọ ga-abụ na ị maara okwu dịka "Ị gaghị aga ije naanị" ma ọ bụ "Nwee ezumike, nwee KitKat". Ejikọtara na mbụ na Liverpool Football Club, ma nke ikpeazụ, nke ọma, KitKat. Ne morete več na Twitterju #YNWA na #HaveABreak.
Site na nchikota ndi a, ulo oru ahu nwere uzo nke ndi ngbuputa nwere ike igosi uzo ha huru uzo di iche iche ma di nma nke nani ndi mmadu nwere ike iru. Na nkenke, ụdị ahụ na-eme ka ndị Ventilatorji na-ere ahịa ha!
Otu ihe iji rịba ama banyere usoro a n’agbanyeghị na ị ga-anwale ma tụọ anya otu esi eji ya. Site na iche echiche mesto na okike nke njirimara gi ma ọ bụ akara gị, ị ga-enwe ike izere ihere na-emecha mechaa.
Bili smo še nič drugega kot Bill Cosby gbara mgbe ha kere ya #Cosbymeme hashtag. N’ụzọ doro anya, ha na-enwe olileanya na ha ga-eji ike nke ala ha na-emepụta ma mee ka hype banyere kpakpando ahụ. O di nwute na ha, nke a bu ihe omuma nke ihe mebiri:
3. Vozite na ọnọdụ ndị na-adịbeghị anya
Ebe mbụ ị ga-achọ ihe ga-eme na Twitterju n’onwe ya. Bụ ezie na ụfọdụ ebe nrụọrụ weebụ na-enye ndụmọdụ na ihe ndị ọzọ nwere ike ịba uru, Twitter ga-enweta o kachasị mma ebe ọ bụ na pogledu ahụ dị na ala ahụ.
Trendsmap, # Hashtags.org, na Hastagify bụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ na-emepụta ihe ndị na-emekarị ka we nwere ike ile anya.
O doro anya na ọtụtụ ebe ndị ọzọ na-enye ọrụ ịkwụ ụgwọ tinyere ndị na-ewu ewu, nyocha na nyocha, n’ihi ya, ị ga-ahụ nkwụnye ziri ezi nke ụgwọ aụụ”ụụụụụụụụụụụụ.
Bụ ezie na atụmatụ dị na hashtag nwere ike ịmepụta ndepụta nke dị ogologo kilomita, e nwere ụfọdụ ihe ndị dị mkpa iji buru n’uche mkpokọta mgbe-na-arụ Twitter.
Nke mbụ: I nwere naanị 140 ihe odide.
Mee ka ha gụọ. Ọ bụrụ na ịgaghị enwe ike tega oge zuru ezu, ọ dịkarịa ala tụlee ịmekọrịta otu onye nwere ahụmahụ ma dị njikere ịrụ ọrụ gị na mgbasa ozire nke enweghị onwe gị.
Sochie nsonaazụ mgbasa glede na statistiko
Na njedebe nke ụbọchị, laghachi na isi ihe, nke bụ icheta ihe samo i ji nọrọ na Twitterju. Ozugbo ị malitere Tweeting na-esote (atụ anya) nke ọma, ụ bụ oge iji mụta otú ọ dị irè hashtags gị.
Site n’ịgbaso nọmba ahịa dịka mgbasa glede ahịa Twitter gị,-ga-enwe ike ịmepụta foto nke ọrụ na ihe na-adịghị. N’ebe a, ị ga-achọpụta na ihe kachasị ewu ewu, ọ bụghị mgbe niile bụ ihe kasị mma maka azụmahịa gị.